ကိုယ်တိုင်ကြုံရရင် ချွေးစီးတွေထွက်ပြီး အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဘီလူးစီးတဲ့ ရောဂါ
အိပ်နေရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို လူတစ်ယောက်တက်ဖိထားသလိုမျိုး ခံစားရပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပျက်နေသမျှလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကိုယ်ကသိနေပေမယ့် အကူညီတောင်းဖို့ အော်ခေါ်နေတာတောင် အသံမထွက်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလည်းလှုပ်မရတာမျိုး သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရဖူးလား?
ဒါကို အရပ်စကားနဲ့ ဘီလူးစီးခံရတယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒေါက်တာက ဘီလူးစီးတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်တော့ ဘီလူးစီးခံရတယ်ဆိုတာ sleep paralysis လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်ပျော်ခါစ၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ယာကနိုးခါစအချိန်တွေမှာ တဒင်္ဂလောက် လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ Sleep Paralysis ကိုခံစားနေရတဲ့လူနာက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိနေပေမယ့် လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အပြင် ကယောင်ကတမ်းတွေမြင်ယောင်တာ၊ အသက်ရှုရမွန်းကျပ်တာမျိုးတွေခံစားရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ဘာတွေက sleep paralysis ကို ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲ?
– စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုခုချို့ယွင်းနေတာ စတာတွေက sleep paralysis ကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
sleep paralysis က ကုသဖို့လိုအပ်လား? ဘယ်လိုတွေကုသရမလဲ?
များသောအားဖြင့် sleep paralysis ခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ မလိုတတ်ပါဘူး။ sleep paralysis ခံစားရသူအများစုဟာ အိပ်စက်အနားယူတဲ့အနေအထား၊ အိပ်ချိန်တွေကြောင့် အဖြစ်များတာဖြစ်လို့ အိပ်တဲ့အနေအထားပြောင်းတာ၊ အိပ်တဲ့အချိန်ကိုမှန်မှန်အိပ်ပြီး တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် ၆နာရီကနေ ၈နာရီကြားအိပ်စက်အနားယူတာစတဲ့ အိပ်စက်အနားယူချိန်ကိုပြုပြင်တာနဲ့ သက်သာတာများပါတယ်။
တချို့စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတချို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ sleep paralysis တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကုသမှုခံယူဖို့ ဒေါက်တာက အကြံပြုလိုပါတယ်
#HOPE#Healthcare#SleepParalysis See less
“သွေးလှူခြင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အသက်များကိုကယ်တင်ပါ”